I-OUKITEL U23 iza kuphehlelelwa ngokusesikweni nge-19 kaNovemba | I-Androidsis
I-OUKITEL yenye yeempawu ezenza i-niche ngokwayo kwimarike. Ifemu ngoku ilungiselela uku yazisa ifowuni yayo entsha kwintengiso, i-OUKITEL U23. Le yeyona fowuni intsha yenotshi, ebhejayo kwinotshi enkulu, eyesiqhelo ngokwesiqhelo kwiscreen sedivayisi. Sele sizazi iinkcukacha ngayo, ukongeza kwixabiso lazo.
Njengesiqhelo kwiifowuni zomenzi, le OUKITEL U23 izakufika ngexabiso elifikelelekayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olulungileyo kwabo bangafuni ukuhlawula kakhulu ngesixhobo esisemgangathweni.
I-OUKITEL U23 inobungakanani bescreen esine-6,18-intshi, ngesisombululo se-pixels eziyi-1080 × 2246.. Inoyilo olulungileyo, njengoko sibona, apho uphawu luye lwaphefumlelwa sisiphelo esiphakamileyo, ngakumbi kwimibala enefuthe lomgangatho, olunika ukubonakala okunethezeka ngakumbi. Iza neHelio P23 njengeprosesa, ehamba ne-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Njengenkqubo yokusebenza isebenzisa i-Android 8.1 Oreo.
Ngokubhekisele kwiikhamera, ngasemva sifumana ikhamera ye-MP eyi-16 MP apho unokuthatha iifoto ezintle. Ngaphambili sinekhamera ye-8 MP yee-selfie. Ibhetri yefowuni yi-3.500 mAh, Ngenkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo. Kwividiyo sinokubona ukuba isebenza njani.
I-OUKITEL U23 izokwaziswa ngokusesikweni nge-19 kaNovemba. Kule ntengiso yokuqala, uya kuba nakho ukufumana ifowuni ngexabiso le- $ 199,99, zombini kwiwebhusayithi yenkampani nakwiivenkile ezisemthethweni. Emva kwalo mhla, ixabiso lesixhobo liya kunyuka nge-10 yeedola ngeveki, ide ifike kwixabiso layo lokuqala lokuthengisa le- $ 229,99.
Ukongeza, uphawu luzisa isimanga, kuba abo banomdla, Ungathatha inxaxheba ekutsaleni i-OUKITEL U23. Ke uthatha le fowuni simahla kwaye ke uya kuba nakho ukubona zonke izibonelelo eziyinikezelayo. Unokufunda ngakumbi malunga nokukhuthaza, kuya kubakho de kube ngu-Okthobha 19, kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OUKITEL U23: I-brand entsha ye-smartphone enotshi